I-chocolate custard elula, i-dessert elula enokunambitheka okuningi. | Ikhishi Recipes
Ikhastadi kashokoledi elula
UMontse Morote | 28/12/2021 09:00 | Isitolo sezibiliboco, Ama-Postres
Ikhastadi kashokoledi elula futhi igcwele ukunambitheka, i-custard enokunambitheka okuningi, kulula ukuyilungisa. Ukwenza lawa ma-custards sizosebenzisa isithelo se-persimmon, uphudingi onempilo ozowuthanda nakanjani njengoba unoshokoledi. Sekuyimfashini kakhulu ukwenza ama-dessert anempilo, lokhu kungenye yazo, ukuthi ngokuqinisekile umndeni wakho noma izivakashi zizomangala.
Ingxube ye-persimmon neshokoledi inhle kakhulu, yenza ukhilimu ocebile kangangokuthi akekho ongasho ukuthi yini edingekayo. Ilungele ukudla izithelo.
Nge-persimmon, ngaphezu kwalawa ma-custards, singalungisa amaswidi amaningi, njenge-custards. Asinawo unyaka wonke ama-persimmons, inkathi yawo ayinde kakhulu, isuka kuMfumfu kuya kuZibandlela, ngakho-ke kumele sisizakale uma sinawo ngesikhathi sonyaka.
Isikhathi Ukupheka: 5 m
1 iyogathi enokhilimu yemvelo enoshukela
Ukuze senze i-custard ye-chocolate elula, siqala sihlanza ama-persimmons, sisuse i-pulp ngosizo lwe-spoon, bese siyibeka engilazini yokushaya noma ku-robot.
Sifaka engilazini i-yogurt ekhilimu engase ibe noshukela noma ngaphandle koshukela. Faka izipuni ze-cocoa nge-cocoa okungenani engu-70%.
Hlanganisa kuze kube yilapho sithola ukhilimu, bushelelezi nokuthi konke kuxubene kahle. Siyazama, singangeza i-cocoa eyengeziwe, ushukela nanoma iyiphi i-sweetener. Kungenziwa ngaphandle kokwengeza noma yini emnandi.
Sifaka ukhilimu ezingilazini noma ezingilazini lapho sizokhonza khona ukhilimu. Siwafaka efrijini futhi siwashiye cishe amahora angu-3-4 ukuze abekwe.
Ngesikhathi sokukhonza sibasusa kubanda kakhulu, singabaphakela ngamakhukhi, amantongomane noma uma uthanda ukhilimu omncane, i-dessert enkulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Abangane » Isitolo sezibiliboco » Ikhastadi kashokoledi elula
I-lentils ene-chorizo ​​​​ebabayo ne-paprika